यि सुन्दरीसँग विबाह गर्दै सलमान खान – Gazabkonews
यि सुन्दरीसँग विबाह गर्दै सलमान खान
फ्यानलाई र्सप्राइज दिँदै सुटुक्क विबाह गरे सरोज अधिकारी र आश्माले, भने कोरोनाले गर्दा तामझाम गर्न पाइएन, छिट्टै पार्टी दिनेछौँ
माल्दिभ्स पुगेर छुट्टी मनाउँदै गरेको प्रियंकाको दृश्य भा इरल, हेर्नुहोस् सं वे दनशिल अं ग प्रर्दशन गर्ने प्रियंकाको यो कस्तो तरिका ?
रोटरीले व्यक्तित्व र नेतृत्व विकास गर्छ : गर्भनर पोखरेल
३ लाखमा बनाउछ सकिन्छ यस्तो आ कर्षक घर
बिहे गरेको १ महिना नहुदै संसार छो डेर गए कोहलपुरका २५ वर्षिय बिरेन्द्रले
सलमान खानकी पूर्व प्रेमिका अचानक चर्चामा आएकी छिन् । ९० को दशकमा सोमी अलीसँग सलमान खानको नाम असाध्ये जोडिएको थियो र दुबैको अफेयरको चर्चा पनि चारैतिर थियो । अब वर्षौंपछि सोमी अली सार्वजनिक भएकी छिन् र आफ्नो सम्बन्ध र करियरको विषयमा कुराकानी गरेकी छिन् ।
सोमी अलीका अनुसार सन् १९९१ मा सलमान खानसँग विवाह गर्न उनी भारत पुगेकी थिइन् । भारत पुगेको एकवर्ष पछि नै उनको भेट सलमान खानसँग भयो र त्यसपछि उनीहरुले एक–अर्कालाई डेट गर्न थाले । दुबैको ब्रेकअप सन् १९९९ मा भयो र त्यसपछि सोमी पढ्नका लागि अमेरिका फिर्ता भइन् । उनी पहिलो पटक भारत आउँदा उनको उमेर १६ वर्ष थियो ।
टाइम्स फ इन्डियालाई दिएको अन्तरवर्तामा सोमी अलीले सलमानसँगको भेट र आफ्नो फिल्मी करियरबारे बिस्तारमा बताइन् । उनका अनुसार मुम्बईमा ाएपछि उनले पोर्टफोलियो सुट गराइन् । उनी एक प्रोडक्सन हाउसमा पुगिन् तर अचम्म के भइदियो भने सलमान खान पनि त्यहाँ केही साथीहरुलाई भेट्न पुगेका रहेछन् । पछि उनलाई बोलाइयो ।
जुन फिल्म ९बुलन्द० मा उनलाई कास्ट गरियो, त्यो रिलिज हुन पाएन तर त्यसको कारणले उनले थुप्रै फिल्म पाइन् । सोमी अलीले भनिन्, ‘निर्देशकहरु मसँग डराउँथे, म रिहर्सलका लागि जाँदैनथेँ । मेरो जीवनशैली भिन्न थियो । म यहाँ फिल्ममा करियर बनाउन आएकी थिइनँ, म त सलमान खानसँग विवाह गर्न चाहन्थेँ ।’
४० वर्षसम्म पनि किन अविवाहित हुनुहुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘मैले सामाजिक कार्यका लागि आफ्नै संस्था खोलेकी छु र म मेरो संस्थासँगै सफल वैवाहिक जीवनमा छु । जब तपाईं प्रेमलाई खोज्नुहुन्छ तब त्यो तपाईं भएठाउँ आउँदैन । अब मलाई सन्तान जन्माउन पनि चाहना छैन ।
तर जब भारतमा थिएँ तब मलाई विवाह गर्ने चाहना थियो र म पाँच सन्तान जन्माउन चाहन्थेँ तर अहिले ४० वर्षकी पुगेँ, अहिले चाहना छैन । यदि कोही व्यक्तिसँग तपाईंको विचार, धारणा मिल्दोजुल्दो छ र माया पनि गर्छ भने म पक्कै पनि यसका लागि सकारात्मक छु तर मैले अहिलेसम्म पनि त्यस्तो व्यक्ति भेटेकी छैन ।’
अन्तत: अविबाहित दीपाश्री निरौला बृन्दावन तिर लागिन्, देलान् त दीपकले साथ ! हेर्नुहोस् यो एक्सक्लुसिभ भिडियो
लाहुरे लाहुरिनिलाई मिलन गराएका सन्तोष देउजालाई पत्नि अनुस्काले गरिन यस्तो गुनासो